Microstation-Bentley - Page 15 - Geofumadas
Ijikọta map na Google Earth
Enwere mmemme dị iche iche iji gosipụta ma jikwaa eserese, gụnyere ArcGIS (Arcmap, Arcview), Manifold, CADcorp, AutoCAD, Microstation, na ọkwa GIS, tupu anyị ahụ ka ụfọdụ si enweta uru ... N'okwu a, anyị ga-ahụ otu esi ejikọ Manifold na ọrụ onyonyo. Nke a bụkwa ụzọ iji budata onyonyo iji chekwaa ya na ụzọ georeferenced. Na ọzọ post m na-ekwu ...
ArcView Google Earth manifold GIS
Otu esi eme ka mkpụrụ ndụ gaa na nchekwa AutoCAD
Ijikwa ihe ndị dị iche iche dị iche n'etiti Microstation na AutoCAD. N'ihe banyere Microstation, a na-edozi ha dị ka faịlụ nwere mgbatị .cel a na-akpọ sel, anụrụ m na a na-akpọkwa ha mkpụrụ ndụ. Na AutoCAD, ngọngọ bụ .dwg faịlụ ndị a na-akpọ site na imewe imewe; n'agbanyeghị nomenclature, ha ka bụ otu ...
Georeferencing ihe oyiyi nke GoogleEarth
Ọ kwuburu okwu banyere ibugo orthophoto na Google Earth ma ọ bụrụ na anyị maara ọdịdị ya. Ugbu a, ka anyị gbalịa na nke ọzọ, ọ bụrụ na anyị nwere echiche na GoogleEarth, otu esi ebudata ya ma tinye ya. Ihe mbụ bụ, na anyị maara ihe ọ dị mma na ya mere na Google Earth, anyị kwurịtara ya na mbụ. Ihe mbu bu inwe ...
Sistemụ GIS, ndị na-erite uru?
O siri ike ịhapụ ọtụtụ nyiwe ndị dị adị, agbanyeghị maka nyocha a, anyị ga-eji ndị Microsoft na-ahụta ndị otu ya na nso nso a na ndakọrịta na SQL Server 2008. Ọ dị mkpa ịkọwa oghere a nke Microsoft SQL Server na ndị mmekọ ọhụrụ, mgbe ọ na-enye ohere njikwa nke data gbasara data na onodu; nke a tupu ...
Ndị na-ese foto enweghị ihe okike?
Ọ dị ka ndị na-ese foto abụghị naanị ndị na-ese ihe oyiyi na-adịghị mma kamakwa ndị na-ede akwụkwọ ọjọọ. N'ihe atụ abụọ ahụ, okwu nke Manifold na nsụgharị nke 7 yiri ka o jiri ụfọdụ windo clipart ma gbanwee naanị agba. Nsogbu a bụ na ndị Tennessee Titans mekwara ya.
Ka georeferenced orthophotos na Google Earth
Na mbụ ekwuru m banyere otu esi eserese map na Google Earth, ugbu a anyị ga-ahụ otu anyị si eme otu ihe ahụ na orthophoto. A na-aghọta ya site na orthophoto, ihe oyiyi ederede, nke anyị maara ọdịdị ya. Google Earth rịọrọ data anọ, nke kwekọrọ na etiti nke akụkụ ọ bụla nke orthophoto (lee foto dị n'okpuru), ọtụtụ kwenyere na ...
Obere ihu Page 1 ... Page 13 Page 14 Page 15